Gbasara Anyị - JIANGSU RICHENG MEDICAL CO., LTD
Nkwalite ngwaahịa, ntụkwasị obi karịa, abawanye, nchekwa, ike karịa
Asambodo ISO13485 + CE, RoHS wee nweta asambodo
Ikike ịba uru in 15
Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ
Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd nke enyemaka nke naanị Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd bụ ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ. Site na nyocha ngwaahịa ndị ọkachamara na ahụike, mmepe na mmepụta, anyị na-enye ngwaahịa ngwaọrụ ịgwọ ọrịa a pụrụ ịdabere na ya, nke dị nchebe ma dị mma. Companylọ ọrụ ahụ nwere ngwa mmepụta na akụrụngwa nnwale, teknụzụ mmepụta dị elu, yana njikwa elu, teknụzụ na ndị ọrụ mmepụta.
Companylọ ọrụ ahụ ehiwela usoro asambodo zuru oke nke ISO9001 zuru ụwa ọnụ, ma gafee asambodo sistemụ ISO13485 na asambodo CE, na-ezube inye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ọrụ klas mbụ. Site na ihe karịrị afọ iri abụọ nke ahụmịhe n’ihe, nyocha na mmepe, ihe eji emepụta injin, mmepe ngwaahịa na njikwa ọrụ, ụlọ ọrụ anyị anọwo n’otu ebe na-ebute isi, na - ebubata ngwaahịa anyị na mba na mpaghara karịa iri abụọ, bụrụ nke ghọrọ onye kachasị amasị nke ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ.
Anyị nwere ma ndị nke ime na mpụga R&D otu, ndị otu anyị R&D bụ ndị ejikọtara nke injinia usoro na ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe; Ndị otu R&D mpụga anyị bụ otu ndị ọkachamara ahụike nwere ezigbo ahụike. Ha na-elekwasị anya na njikarịcha nke ngwaahịa dị ugbu a na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Richeng na-ejide ikike ị nweta ihe eji enyere mmadụ aka.